ငါးကြိုက်သူများအတွက် စားဖိုမှူးအသစ်လေးလက်ရာများနဲ့ KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ငါးကြိုက်သူများအတွက် စားဖိုမှူးအသစ်လေးလက်ရာများနဲ့ KZ’s ထမင်းဆိုင်
ငါးကြိုက်သူများအတွက် စားဖိုမှူးအသစ်လေးလက်ရာများနဲ့ KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Nov 4, 2013 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 54 comments
ဒီ တစ်ပတ်ကတော့ ညီမငယ် လေး မူယာ ကို အကူအညီတောင်းထားတာပါ။
ကေဇီ အလွန်သက်သာတဲ့ အဖြစ်ကို မနာလိုအောင်ပြောရရင် ဒီ စားဖိုမှူးအသစ်က ……
– စာလည်း စီကာစဉ်ကာ ရေးတတ်ပါတယ်။
– ဟင်းတွေကို ဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတာလည်း ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
– ဆိုင်ရှင် ကဂျိကဂျောင်ကိုလည်း သည်းခံပါတယ်။
– ဒီမှာလည်း မန်ဘာဖြစ်ပါပြီ။
– သူ့မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဟင်းချက် ပေ့(ချ) လည်း ရှိပါတယ်။
ကဲ ကေဇီအတွက် ဘာလိုသေးတုန်းးးး
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးရုံပဲ ကျန်ပါတယ်။
နောက် ဆို သူ့လက်ရာတွေ သူ့ကိုယ်ပိုင် ပို့(စ) အနေနဲ့ မကြာခဏတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။
မန်းလေးကပါပဲ။ စပ် ရင် အမျိုးတော်နေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးမစပ်သေးပဲ သူ့ကို ဟင်းအရင်စပ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီ၊။
ငါး ကြိုက်သူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ငါးခူကြော်နှပ်၊ ထောပတ်ပဲနှပ်၊ ကင်ပွန်းရွက်ချဉ်ရည်
– ငါးခူကြော်နှပ်အတွက် ပထမဆုံး ငါးခူကို အချွဲတွေစင်သွားအောင် ပြာနဲ့ နာနာပွတ်၊ စင်အောင်ဆေး၊ ပြီးရင် ခေါင်းဖြတ်၊ ဗိုက်ဖောက် သန့်စင်ပြီး ဆား၊ အသားမှုန့်၊ နနွင်းနဲ့ နယ်ပြီး ကြော်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း၊ ပြီးရင် ကြက်သွန်နီထည့်ကြော်၊ နွမ်းသွားရင် ကြက်သွန်ဖြူထည့်၊ ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်၊ ငါးငံပြာရည်၊ အသားမှုန့်ထည့်ပါ။ ကြော်ထားတဲ့ ငါးခူထည့်ပြီး နှံ့အောင် မွှေပါ။ အကြာကြီးထားစရာမလိုပါဘူး။ငရုတ်သီးတူးသွားတတ်ပါတယ်။
– ထောပတ်ပဲကို အခွံခွာ၊ ရေဆေး၊ နှပ်မယ့်အိုးထဲ ထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း ထည့်၊ ကြက်သွန်နီတစ်လုံး ပါးပါးလှီး၊ နနွင်းမှုန့်၊ ငပိအနည်းငယ်၊ ဆီနဲ့ ရေထည့်ပြီး နှပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ရေခန်းခါနီးရင် ဆား၊ အသားမှုန့်ထည့်၊ ရေခန်းပြီး ဆီပြန်သွားရင် ထောပတ်ပဲနှပ်လေး ရပါပြီ။
– ကင်ပွန်းရွက်ကို အရင် သင်၊ ချက်မယ့်အိုးထဲကို ကင်ပွန်းရွက်၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်း၊ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးပါးပါးလှီးထည့်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံး လှီးထည့်၊ ပုစွန်ခြောက်ထောင်းထည့်၊ ငပိ၊ ဆီလေးပါလေကာနဲ့ လုံးပါ။ ကြေရင် ရေနွေးလောင်းထည့်၊ ငါးငံပြာရည်၊ အသားမှုန့်ထည့်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူရင် ကင်ပွန်းရွက်ချဉ်ရည် ရပါပြီ။
ငါးဖမ်းမကင်၊ ရွှေဖရုံသီးနှပ်၊ မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်း
– ငါးဖမ်းမအကောင်ကြီးကြီးတွေကို ခေါင်းဖြတ်၊ ဗိုက်ဖောက်သန့်စင် (ရေမဆေးရပါ)၊ ဆားနယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ တစ်ညသိပ်ထားပါ။ နောက်နေ့ မကင်ခင် ဆားရည်စိမ်ထားပါ။ ကင်ခါနီးမှ ရေဆေးပြီး မီးသွေးမီးဖိုမှာ အကျက်ညီအောင် ဟိုဘက်ဒီဘက် လှန်ပြီး ကင်ပါ။ အရေခွံလေးတွေ ကြွပ်ရွလာရင် ပဲဆီမွှေးမွှေးလေး ဆမ်းပါ။
– ရွှေဖရုံသီးနှပ်ဖို့အတွက် ရွှေဖရုံသီးခပ်ရင့်ရင့်ကို အတုံးလေးတွေ တုံးပါ။ ရင့်မှသာ စေးပြီး ချိုပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပုစွန်ခြောက်ကို ထောင်းပါ။ အိုးထဲကို ရွှေဖရုံသီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပုစွန်ခြောက်၊ အချိုပိုလေးဖို့အတွက် ငပိလေးပါလေကာထည့်၊ နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်၊ ဆား၊ အသားမှုန့်၊ ဆီ၊ ရေကို ချိန်ဆထည့်ပြီး တည်ပါ။ အတုံးမပျက် နူးအိ ဆီပြန်လာရင်တော့ ချိုဆိမ့်နေတဲ့ ရွှေဖရုံသီးနှပ်လေး ရပါပြီ။
– မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်းဖို့အတွက် ပထမဆုံး ငပိကို ကင်ပါ။ မန်ကျည်းသီးစိမ်းကို အညှာခြွေ၊ အပေါ်က အမည်းတွေ စင်အောင် ရေဆေးပြီး စစ်ထားပါ။ ငရုတ်ဆုံထဲမှာ မန်ကျည်းသီးစိမ်း၊ ဆား၊ ငရုတ်သီး၊ ငပိကင်တို့ကို ညက်အောင်ရောထောင်းပါ။ ပဲဆီမွှေးမွှေးလေး ဆမ်းကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ငါးမြင်းပေါက် အိုးကပ်ဆီပြန်၊ မုန်လာဥချဉ်ရည်၊ ရွှေပဲရွက်သုတ်
– ပထမဆုံး ငါးမြင်းပေါက်လေးတွေကို ခေါင်း၊ ပါးဟပ်ဖြုတ်ပြီး ဗိုက်ဖောက်ကာ သန့်စင်ထားပါ။ ပြီးရင် အသားမှုန့်၊ ငံပြာရည်နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ။ခရမ်းချဉ်သီးကို အစေ့ထုတ် ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီး နနွင်းမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်နဲ့ ဆီသတ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကြေအောင် ရေထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ငံပြာရည်၊ အသားမှုန့်ထည့်ပါ။ အနှစ်ကြေရင် ငါးထည့်ပါ။ ငါးကျက်အောင် ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ငါးမကြေအောင် အိုးကို အသာလှုပ်ပေးပါ။ အကျက်ညီအောင် ငါးကို တစ်ဖက်လှန်ပေးပါ။ ဆီပြန်ပြီး ခြောက်ရင် မီးဖိုပေါ်မှ ချခါနီး ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ နံနံပင် အုပ်ပေးပါ။ အလယ်ရိုးတစ်ရိုးထဲပဲပါပြီး စားရတာ အလုပ်မရှုပ်ဘဲ အရသာရှိတဲ့ ငါးမြင်းပေါက် အိုးကပ်ဆီပြန်လေး ရပါပြီ။
– ရွှေပဲရွက် အညွန့်လေးတွေ၊ အနုလေးတွေချည်း ရွေးသင်ပြီး ရေဆေးထားပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးဖျောပြီး အကျက်မလွန်ဖို့ ရေခဲရေထဲချက်ချင်း ပြန်စိမ်ပါ။ ကြက်သွန်နီကို ဆီချက်ချက်ထားပါ။ မြေပဲကို လှော်ပြီး ထောင်းထားပါ။ သုတ်မယ့်ပန်းကန်ထဲကို ရွှေပဲရွက်ရေစင်အောင် ညှစ်ထည့်၊ ဆီချက်၊ မြေပဲထောင်း၊ ဆား၊ အသားမှုန့်၊ သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး နှံ့အောင်နယ်ပါ။ အပေါ်က ကြက်သွန်နီကြော် ဖြူးပါ။
ငါးဖယ်နဲ့ ဘိုစားပဲသီး ရေလည်ဆီလည်၊ ငပိထောင်း၊ မုန်လာချဉ်သုတ်
– ငါးဖယ်စစ်စစ်ကို ဆား၊ အသားမှုန့်နဲ့ စေးနေအောင် ထောင်းပြီး တေပါ။ ပြီးရင် အပြားလေးတွေ ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ။ ဘိုစားပဲသီးကို အမျှင်တွေသင်ပြီး လက် ၂ ဆစ်စာလောက် ချိုးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီကို ထောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးလောက်ကို အစေ့ညှစ်ပြီး လှီးထားပါ။ အိုးထဲကို ငါးဖယ်ကြော်၊ ဆီ အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နနွင်းမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ငါးငံပြာရည်၊ ငပိလေးပါလေကာ၊ အသားမှုန့်ထည့်ပြီး လုံးပါ။ အနှစ်လိပ်သွားရင် ရေနွေးခပ်များများထည့်ပါ။ ရေဆူစပြုလာရင် ပဲသီးထည့်ပါ။ ပဲသီးကျက်ပြီး အရည်သောက်ဆမ်း အနေလောက်ဆို ရပါပြီ။
– ငပိထောင်းအတွက် အချိုဓာတ်ကဲတဲ့ ထိုင်းငပိကို သုံးပါတယ်။ ထိုင်းငပိ၊ ကုလားအော် ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို အရင်ကင်ပါတယ်။ ရွှေပုစွန်ခြောက်ကို မွှေးလာအောင် လှော်ပါတယ်။ ငရုတ်ဆုံထဲမှာ ငပိ၊ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ထန်းလျက်တစ်လုံးလောက်ကို ရောပြီး ညက်အောင် ထောင်းပါတယ်။ ပြီးမှ ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး ပဲဆီမွှေးနဲ့ သံပုရာရည်လေး ဆမ်းပါတယ်။
– မုန်လာဥကို ရေဆေးပြီး စဉ့်အိုးထဲထည့်ကာ ထမင်းရည်သန့်သန့်၊ ဆားတို့နဲ့ အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပြီး ချဉ်ဖတ်စိမ်ပါတယ်။ ၃ ရက်လောက်ဆိုရင် မုန်လာချဉ်ကောင်းကောင်းရပါပြီ။ သုတ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး မုန်လာချဉ်ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။ မြေပဲလှော်ကို မညက်တညက်ထောင်းထားပါ။ ပဲပုတ်တစ်ပြားကို မီးကင်ပြီး မှုန့်နေအောင် ထောင်းထားပါ။ သုတ်မယ့်ပန်းကန်ထဲမှာ မုန်လာချဉ်၊ မြေပဲထောင်း၊ ပဲပုတ်ထောင်း၊ ပဲမှုန့်အကျက်၊ ငါးငံပြာရည်၊ အသားမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ဆီချက်ထည့်ပြီး နှံ့အောင် နယ်ပါ။ ထွေးထွေးပျစ်ပျစ် ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်အရသာလေးနဲ့ မုန်လာချဉ်သုတ်လေးပါရှင်။
ငါးမြွေထိုး အချဉ်ဆီပြန်၊ ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့ ဘဲဥကြော်၊ ပဲကြီး ဆူးပုတ် ပြည်ပန်းညိုဟင်းချို ပြည်ပန်းညိုရွက်ဟင်းချို
– ငါးစင်ရိုင်းဆီပြန်၊ ပဲနီလေးနဲ့ ကြာဇံ၊ ပန်းမုန်လာနဲ့ ကြက်ဥကြော်၊ ငံပြာရည်ဖျော် (ပုံထဲမှာ မရိုက်လိုက်ရလို့) နဲ့ အတို့အမြှုပ်က ကန်စွန်းရွက်၊ ဆလတ်ရွက်၊ ခရမ်းသီးအသေးပြုတ်နဲ့ မလွှပွင့်ပြုတ်ပါ။ ငါးစင်ရိုင်းဆီပြန်အတွက် ငါးစင်ရိုင်းလေးတွေကို ခေါင်းဖြတ်၊ အမြီးဖြတ်၊ ဗိုက်ဖောက်သန့်စင် ရေဆေးပြီး ငါးငံပြာရည်၊ အသားမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ထောင်းထားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို အစေ့ညှစ်ပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ။ ချက်မယ့်ဒယ်ထဲကို ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်နီတစ်ဥလောက်ကို စိတ်ထည့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်နဲ့ ဆီသတ်ပါ။ မွှေးလာရင် ရေထည့်ပါ။ အနှစ်လိပ်လာရင် ငါးထည့်ပါ။ ငါးနှပ်ထားတဲ့ပန်းကန်ကို ရေကျင်းပြီး ထည့်ပါ။ ငါးအကျက်ညီပြီး မကြေအောင် ဟိုဘက် ဒီဘက် အသာလှန်ပေးပါ။ အရသာအပေါ့အငံမြည်းပြီး ဆား၊ အသားမှုန့်ထည့်ပါ။ ဆီပြန်လာရင် နံနံပင် အုပ်ပါ။ စပ်ရှိန်းရှိန်းလေးနဲ့ ငါးစင်ရိုင်းဆီပြန်ဟင်းတစ်ခွက် ရရှိပါပြီ။
– ပန်းမုန်လာနဲ့ ကြက်ဥကြော်ဖို့အတွက် ပန်းမုန်လာကို အရွယ်တော်လေးတွေ လှီးပြီး ရေစင်စင်ဆေးကာ ဇကာနဲ့စစ်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းထားပါ။ ဆီပူအိုးတည်ပြီး ကြက်သွန်နီထည့်ဆီသတ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါ။ ပန်းမုန်လာထည့်ပါ။ ဆား၊ အသားမှုန့်ထည့်ပြီး နှံ့အောင် မွှေပါ။ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ပန်းမုန်လာရေခမ်းအောင် ကြော်ပါ။ ရေခမ်းရင် ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပြီး နှံ့အောင်မွှေပါ။ ပူပူနွေးနွေး ချိုချိုဆိမ့်ဆိမ့်နဲ့ ပန်းမုန်လာနဲ့ ကြက်ဥကြော် ဟင်းတစ်ခွက် ရပါပြီ။
– ပဲကြီး ဆူးပုတ် ပြည်ပန်းညိုဟင်းချို ချက်ဖို့အတွက် ပဲကြီးကို အရင်နှပ်ပါ (ပဲကြီးနှပ်နည်း ရေးပြီးပါပြီ)။ ပဲကြီးနှပ်ကို ပန်းကန်ထဲ ခပ်ထည့်ပြီး အိုးထဲမှာ အနည်းငယ် (၅ ပုံ ၁ ပုံလောက်ဆို ရပါတယ်) ချန်ထားပါ။ ပြီးရင် ရေနွေးလောင်းထည့်ပါ။ အရသာအတွက် ဆား၊ အသားမှုန့် ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။ ဆူးပုတ်ရွက်နဲ့ ပြည်ပန်းညိုကို အရွက်နုလေးတွေချည်းပဲ ရွေးပြီး သင်ထားပါ။ ရေစင်စင်ဆေးထားပါ။ ဟင်းချိုအိုး ရေကျရင် ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီးမှ အရွက်လေး ခပ်ပါ။ ဆူးပုတ်တစ်မျိုးထဲဆို အနံ့ပြင်းမှာစိုးတဲ့အတွက် ပြည်ပန်းညိုလေး ကူထားပေးတာပါ။
ဘဲဥ အချဉ်ဆီပြန်၊ ပုဇွန်ထုတ်ကြော် ငရုတ်ဆားထောင်း
– ပထမဆုံး ဘဲဥကိုပြုတ်ပြီး အခွံခွာ၊ အရသာဝင်အောင် ထက်ခြမ်း ဓားရာပေးထားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို အစေ့ထုတ်ပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကို ညှက်နေအောင် ထောင်းထားပါ။ ဒယ်အိုးကို ပူအောင် တည်၊ ဆီထည့်ပြီး လှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နနွင်းမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်နဲ့ ငပိအနည်းငယ် ထည့်ပြီး ခရမ်းချဉ်ကြေသွားအောင် ဆီသတ်ပါ။ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးလိပ်သွားရင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ဆားကို ကြိုထည့်ရင် ခရမ်းချဉ်သီး မကြေတတ်ပါဘူး။ ဓားရာပေးထားတဲ့ ဘဲဥထည့်ပြီး အနှစ်အရသာဝင်အောင် အသာမွှေပါ။ အဲဒီနောက်မှာ ရေနွေးအနည်းငယ်နဲ့ ဖျော်ထားတဲ့ မန်ကျည်းရည်ထည့်ပါ။ ဆီပြန်ရင် အလွန်အရသာရှိတဲ့ ဘဲဥအချဉ်ဆီပြန်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီ။
– ပုစွန်ထုပ်ကြော်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ဝမ်းဗိုက်က ရေယက်တွေနဲ့ လက်တွေကို ကတ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပစ်ပါ။ အခွံခွာပြီး နောက်ကျောခွဲကာ ချေးကြောင်းကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ခေါင်းထဲက သွားနှစ်ချောင်းနဲ့ အစာဟောင်းအိတ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ဆွဲထုတ်ပါ။ အဆီအိတ်ကို မပေါက်အောင် သတိထားရပါမယ်။ ပုစွန်ထုပ်ကြော်ရဲ့ အရသာဟာ ခေါင်းထဲက အဆီပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ပြီးရင် ရေသေချာဆေးပြီး ဆားနယ်ထားရပါမယ်။ ဆီအိုးကို ပူအောင် တည်ပြီး ပုစွန်ထည့်ကြော်ပါ။ ပုစွန်ကျစ်လာရင် ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ (ပုစွန်အကွေး၊ ငါးအနွေးဆိုတဲ့အတိုင်း ကျက်လွယ်တဲ့အတွက် ရေအများကြီး မထည့်ရပါဘူး။ ဒါမှသာ ပုစွန်အသားက နူးညံ့နေမှာပါ။ ရေများရင် အကျက်လွန်ပြီး အသားမာသွားတတ်ပါတယ်)။ ပုစွန်ထုပ်လေးတွေ ကွေးပြီး နီရဲကာ ဆီပြန်လာရင်တော့ အလွန်တရာ အရသာရှိလှတဲ့ ပုစွန်ထုပ်ကြော်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုမုန့်၊ သကြား၊ အသားမှုန့် ဘာတစ်ခုမှ မကူထားဘဲ ဆားလေးနဲ့သာ နယ်ကြော်ထားတဲ့အတွက် ပုစွန်ထုပ်ရဲ့သဘာဝအချိုအရသာကိုလည်း ခံစားရမှာပါ။
– ငရုတ်ဆားထောင်းအတွက် ငရုတ်သီးခြောက်ကို ဖုန်၊ သဲစင်အောင် ရေသေချာဆေးပြီး ညက်အောင် ထောင်းပါ။ ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူပါ တစ်ခါထဲ ထည့်ထောင်းပါ။ ညက်ရင် ပဲဆီမွှေးမွှေးလေး အပေါ်က ဆမ်းလိုက်ပါ။ ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ထမင်းမြိန်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ခရမ်းချဉ်သီး ငပိချက် နဲ့ တို့စရာ၊ ငါးကြင်းဖြူကြော်၊ ဂေါ်ဖီကြက်ဥကြော်
– ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက်အတွက် ခရမ်းချဉ်သီးကို အစေ့ထုတ်ပြီး ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းများများကို ထောင်းထားပါ။ ချက်မယ့်ဒယ်ထဲကို ခရမ်းချဉ်သီး၊ ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ နနွင်းမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ငပိနည်းနည်း၊ ဆီထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ တဖျစ်ဖျစ်အသံမြည်လာရင် ရေထည့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကြေပြီဆိုမှ ဆား၊ အသားမှုန့်ထည့်ပါ။ ဆားကို အစောကြီးထည့်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးမကြေတတ်ပါဘူး။ ဆီပြန်ရင်တော့ ခရမ်းချဉ်ငပိချက် စပ်စပ်လေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ တို့စရာလေးကတော့ ရုံးပတီသီးလေး ရေနွေးဖျော၊ ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့ ခရမ်းသီးလေးတွေကို ပြုတ်၊ အရည်သောက် မချက်ဖြစ်တော့ ရေနွေးကြမ်းပူပူလေးပဲ မှုတ်သောက်လိုက်တယ်။
– ငါးကြင်းဖြူကြော်ဖို့အတွက် ငါးကြင်းဖြူခုတ်သားကို ရေဆေးပြီး ဆား၊ နနွင်းမှုန့်၊ အသားမှုန့်နယ်ထားပါ။ ဆီပူအိုးတည်ပြီး မီးအသင့်အတင့်နဲ့ကြော်ပါ။ မီးများရင် အပေါ်ယံတူးသွားတတ်ပါတယ်။ အရမ်းကြွပ်သွားရင်လည်း စားရတာ အရသာမရှိပါဘူး။ မီးအနေတော်နဲ့ကြော်မှ ရွရွလေးနဲ့ အသားလေးအိပြီး စားလို့ကောင်းပါတယ်။
– ဂေါ်ဖီထုပ်ကို ပါးပါးလှီးပြီး ရေဆေးကာ စစ်ထားပါ။ ဆီအိုးတည်ပြီး နနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပြီး ဆီသတ်ပါ။ ပြီးရင် လှီးထားတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်ထည့်ပါ။ ဆား၊ အသားမှုန့် ထည့်ပါ။ ရေခန်းအောင် ကြော်ပြီး ကြက်ဥနှစ်လုံးဖောက်ထည့်ပြီး နှံ့အောင် မွှေပါ။ ပူပူနွေးနွေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဟင်းစပ်လေးလည်း အားပေးရင်း အနော့ ညီမငေးကိုလည်း ကြိုဆိုပေးကြပါဦးးးးနော်
ကဲ .. ဒီဒေါ့ ..
စနေနေ့မှ ဂျီးဒေါ်ဆီ အလည်လာဒေါ့မယ် …
လာရင် ၂ ယောက်လာမှာလားးးး
ကေဇီညီမ ကိုတော့ ခိုက်သွားပီ…ကျွန်တော်က အမဲ ၀က် သိပ်မကြိုက်ဘူးရယ်…ပဲအမျိုးမျိုး ဘိုလုပ်လုပ်ကြိုက်တယ်…စာတွေ့တင် မတင်းတိမ်တော့ဘူး ငါတွေ့လေးစားချင်တယ်…
ငါးခူကြော်နပ်ကို ငရုပ်သီး အမြဲတူးသွားတက်လို့ ကျက်သွားပြီး မီးပိတ်တော့မှ ငရုပ်သီးထည့်တယ်..ခုတော့နည်းတစ်ခုရလာတယ် ငရုပ်သီးခွဲခြမ်းကို ၅ မိနစ်လောက်ရေစိမ် ပြီးရေစင်အောင်ပြန်စစ်ပြီးထည့်ချက်တာ ငရုပ်သီးမတူးတော့ဘူး မိုက်တယ်…
စနေ ဆန်းဒေး ဟင်းလျာ ရင်မခုန် မိပါ ..ကျန်ရုံးဖွင့်ရက်
ဟင်းများ ကတော့ တကယ် အမိုက်စား ဖြစ်ပါ၍
၄င်း ညီမလေး ဆိုသူ အား မဟာ ထံသို့
မန်းဒေး တူ ဖရိုင်းဒေး ချိုင့်ဆွဲ ပို့ပေးပါရန်.
အော်ဒါ မှာ ပါသည် ။
စားမည် ၀ါးမည် ..
ညီမလေးကို ပို့ ရမှာလားးးးး
ဟင်း ကို ပို့ ရမှာလားးး
အင်္ဂါနဲ့ ကြာသပတေး အကြိုက်ဆုံးပါ
အန်စာတုံး နဲ့ တူတူလာခဲ့။
သွားရည်ကျ သွားတယ် မမဂျီးရေ။
ချက်ပြုတ်ကျွေးမယ့် အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်လည်း အမြန်လိုချင်သွားတယ်
စောင်းမြောင်း ပြောဆိုခြင်း သည်းခံပါ။
မမ…အပျိုကြီးရားဟင်…တားကိုစဉ်းစားပေးပါလားဂျာ…ဟင်းစပ်ကောင်းလို့….အဟိဟိ..တားလေ ရုပ်ချော..အရပ်မြင့် ..ပညာတတ်တဲ့အပြင်….သဘောထားပါကြီးတယ်…အဟိဟိ
ဆောရိုးနဲ့ ဆို ညီမလေးးးးး
ညီမလေးက ကြွားတတ်တဲ့သူတွေ မကြိုက်ဘူးတဲ့။
ဆောရိုးနဲ့မှ ညလေး ဆိုတော့ တားတို့အရွယ်ဝတ် ကလေးပေါ့စ့်
ညလေးအတွက်ဆို. အရှေ့တောင်အာရှ က သဘောအကောင်းဆုံးနဲ့
နာ့ ညလေးက ဖားသားလည်းချက်တတ်တယ်။
အို..ခေးရယ်…အောင်ရဲလင်းလေးနဲ့ ရဲတိုက်လေးကို သွားစိတ်မကစားနဲ့နော်…..
ကိုကိုကချင်နုထွားကြီးမှ …ခေးနဲ့..သင့်တော်တာရယ်…အဟိဟိ …လူကြီးတွေစီစဉ်တာလက်ခံလိုက်ပါ..ခေးရယ်…ခေးကောင်းဖို့ပြောတာ….ခုခွိခုခွိ….
ဆောရိုး ( မေတ္တာရှင် )
ကျုပ်ကတော့ သောကြာနေ့ ဟင်းစပ်လေးသွားရည်ယိုမိကြောင်းပါဗျာ…
မန်းလေးသူလေး “မူယာ” ကိုလည်း အတိုဂျီးဒွေက ကြိုဆိုပါဂျောင်းးးးး
ကြိုဆိုတဲ့ အတိုဂျီးကို ကျေးဂျူးတင်ဘာဒီ။
နာ့ ကို စောင့်ကြဦးလေဟယ်။
အညာဟင်းလေးတွေအေ ကောင်းလိုက်ချက်ကတော့။ အင်္ဂါနေ့ဟင်းကိုပိုကြိုက်ပေမဲ့ တပါတ်လုံးကြိုက် သအေ့။ အိမ်မယ် ကြက်နဲ့ ငါးပဲစားတာမို့ ငါးချက်ရမယ်ဆို ဘယ်လိုဗားရှင်းနဲ့ချက်ရမလဲ ခေါင်းအမြဲကိုက်ရ တာ။ အခုတော့ အတော်လေးအဆင်ပြေသွားသမို့ မှတ်ထားလိုက်ပီချွေးမွလေးရေ ကျေးကျေးပါ။ ဆိုင်ရှင် ရောစာဖိုမှုးရောပါ
အဲလာဆို အစဉ်ပြေတဲ့ တစ်ပတ်ကို ကြက်သားချက်ပေးမယ်နော်။
ကြည့်ရ၊ ဖတ်ရတာလဲ စားချင်စဖွယ်မို့
တစ်ပတ်စာ အော်ဒါ မှာဖို့ တွေး…
ဒီအပတ် ခြေလေးချောင်းသားပဲ စားမယ် တွေးထားလို့
နောက်အပတ်မှာ ရဦးမလား ဟင်
မမှာနဲ့ ဒီ ဟင်းစပ်တွေ က ယောက်ခမ အတွက် စပယ်ရှယ် စပ်ထားတာ။
အရင် ကုန်းပေါ်က ဟင်းစပ်တွေတုန်းကတော့ မလာပဲနဲ့။
Herbivores တွေနဲ့ဆင်တဲ့ Humans ဆိုတော့ကာ …Humans are naturally plant-eaters ဆိုတာ သိသလား…မျိုးရိုးဗီဇကို မဆန့်ကျင်ကြပါနဲ့ …..အဟိဟိ …
( တကယ်က မိဘနဲ့မနေရလို့ …ကွကိုယ် အပြင်မှာပဲစားရလို့…ချက်ကျွေးမယ့်လဲလူမရှိ…
နာတို့ကချင်တွေက မစားရတဲ့စပျစ်သီး ချဉ်တယ်ပဲ …အဟိဟိ ….
humans are not physically created to eat meat..
နာ ရှောင်တဲ့ အသား ထဲ ကချင်သား မပါဘူးနော်။
နုထွားကာ အိညက်တဲ့ …
ဆီပြန်ကာ ..ချက်လိုလှရင်ဖြင့် …
ရေစာထဲမှာ ငါးပိရည်နဲ့ ငါးသလောက်ကလွဲရင် အကုန်စား…
အဟဲ… အချဉ် မန်ကျီးမှည့်နဲ့ချက်ရင်တော့ နဲနဲစား၏…
ငါးကြင်းပေါင်းတို့၊ ငါးမြင်းဆီပြန်တို့၊ ငါးခေါင်းချဉ်ရည်တို့ ကျန်သေးတယ်…
ထပ်ဖြည့်လိုက်ရင် ရေသတ္တဝါတွေ… မျိုးတုန်းတော့မယ်…
ဒါ အိမ်ချက် ငါးဟင်းတွေပဲရှိသေးတယ်။
ကျောက် ချက်ရင် ပင်လယ်စာ အကုန်ပါအောင် ချက်ကျွေးပါ၊
အသက်ရှည်စေချင်ရင် ငါးလေးများများစားပါလို့ ဆိုရိုးရှိတာနဲ့အညီ ငါးကလေးအိုးကပ်ဟင်းကျတော့ ဒီထမင်းဆိုင်က ဟင်းစပ်မပါလို့ ငါးခူကြော်နှပ်၊ ထောပတ်ပဲနှပ်၊ ကင်ပွန်းရွက်ချဉ်ရည် ဟင်းစပ်ဘဲ ရောက်လက်စနဲ့ အားနာပါးနာမှာ စားရမယ်ထင်တယ်ဗျ။
သောကြာနေ့ ဗလီ မတက်ခင် ….
ဘယ်ငါးကို ဟလာလုပ်ပီး ခံတွင်းတွေ့အောင် ချက်ပြုတ်နည်း ပြောစေချင်ပါတယ်
ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ စာဖိုမှုးနတ်များ .. ခွင့်ပြုပါ…။
အပေါ်က ပေ့(ချ) က ညီမလေး ရဲ့ ဟင်းချက်ပေ့(ချ)
“ခံတွင်းမြိန်စရာ မေ့လက်ရာ” လို့ခေါ်တယ်။
အဲဒါလေးပါ ထည့် ကြော်ငြာပေးပါ။
မကြော်ငြာပေးရင် Kai ကို ကိုင် အောင် စားဖိုမှူးနတ်တွေကို တိုင်လိုက်မယ်။
အောင်မယ်လေး..ဒေါ်ကေဇီရေ…ညီမလေး ရဲ့ ဟင်းချက်ပေ့(ချ)ကိုသွားကြည့်လိုက်တာ
သွားရည်တွေကျပြီး ဗိုက်ဆာလာလို့ အကုန်ဆက်မကြည့်သေးပဲ ချက်ချင်းပြန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်..
အနော်လည်း အစက ဒီ ပို့(စ) ကို ဓာတ်ပုံထည့်ဦးမလို့။
ကြောင် ကြောင့် အတွက် သင်္ဘောသီးများ ရေသူမ ဖမ်းပေးကြပါ
ရေချိုငါး ကို အရင်က တန်ဖိုးမထားခဲ့တာ အခု မရတော့ မှ အသားထက် ပိုကြိုက်နေပါပေါ့။
ကိုယ်တိုင်ချက်မစားနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ သူများချက်ပေးတာ ကြည့်ပြီးတစ်ဝ တီးသွားတယ်။
ကေဇီ နဲ့ စာဖိုမှူးသစ်လေးမူယာ ကို ကျေးဇူးအကြီးကြီးပါဟေ့။
ခု ရေချိုငါး ငတ်လိုက်တာကို။
ဒီတစ်ပါတ်တော့ …ကေဇီနဲ့ မူယာဆိုတဲ့ ညီမလေး ၂ယောက်ကိုတော့ နည်းနည်းလေး ပို ချစ်မိပါတယ်ဗျာ…။
ငါ့ညီမလေးတွေ ဆိုရင်တော့ ရှယ်ဘဲ…ငါးဟင်းဆို အရမ်းကြိုက်တာ..
ကဲ။။။ ဒီတစ်ပါတ်…ဆိုင်ရှေ့ မှာကို အိပ်ယာလိပ်နဲ့လာစောင့်ပြီး စားမှာပါ..။
အဲလာ ဆို အမွေစား အမွေခံ မွေးစားလိုက်။
နောက် ဖွင့်တဲ့ဆိုင်မှာ သားသတ်လွတ်ဟင်း ချက်ကျွေးရင် ပိုချစ်လိမ့်မယ်။
ပုံနှိပ်ထုတ်တဲ့အခါ.. အမေရိကားကလူတွေ ဘာငါးလဲ ရှာရလွယ်အောင်.. အင်္ဂလိပ်လို အခေါ်အဝေါ်လိုက်ရှာကြည့်ပါတယ်..။အဲဒါအောက်ကလင့်ခ်မှာ ဘာသာပြန်တွေတွေ့လို့.. တလက်စထဲတင်ပေးလိုက်ကြောင်း..
-ကကတစ် = Giant sea perch @ Bectic
-ကကူရံ (ငါးလက်ခွါ) = King fish @ Tasselfish
-ကဘီးလူး = Blue grey mullet
-ကသပိုး = Bar- eyed goby
-ကင်းမွန် = Squid
-ကျောက်ပုဇွန် = Lobster
-ကျော်စံကွေး =Small frog
-ခုံးတခြမ်း = Abalone
-ငါးကျည်း= Sccobranch catfish @ Scorpian catfish
-ငါးကျည်းခြောက်=Smoked Sccobranch catfish
-ငါးစင်ရိုင်း=Striped dwarf catfish
-ငါးတန်=Striped cat fish
-ငါးနုသန်း=Whisker sheatfish@ pagoda fish
-ငါးပနော=Great snake head fish
-ငါးပါးနီး=Humpback red snapper
-ငါးပုတ်သင်(ငါးဖယ်အတု)= Soldier croaker
-ငါးဖယ်အောင်း=Smelt @ Siamese River abramine
-ငါးဘတ်=Great white sheatfish
-ငါးရွှေ=Yellow pike conger
-ငါးမြင်းအုက်ဖား=Flat headed catfish
-ပုဇွန်လုံး=Land crab, fresh water crab
-ပလာတူးငါး=Short body mackeral
နို့မို့ စကားလက် နဲ့ အွိုင်စတာနဲ့ မကွဲဘူးးးး
ဘယ်နန်းက စကားလက်တုန်း. အသံထွက်သေချာဖတ်ပါ မဇာယိ.
အဲ အသံထွက်ကို အဲလိုပဲ ရေးတတ်တယ်။
သဂျီးရေ … တချို့ ရေသတ္တဝါတွေက ဒီကနဲ့ ဘိုလိုအခေါ်သိပ်မတူဘူး ခီည…
ကသပိုး(ဘိုး) = Tank goby
ငါးကြင်း = Indian carp
ပထမဆုံး ပွားချင်တာက အမေလုပ်သူက ဧရာဝတီတိုင်းသူမို့ …..
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ဘက်နေခဲ့ဖူးသမို့ ငါးဖမ်း ငါးစမ်း ပုစွန်ငုပ် အကုန်တတ်၏
နောက်ပီး အသားဟင်းလျာမှာလဲ ငါးကို အကုန်ကြိုက်၏ ကိုယ်တိုင်လည်း မိရိုးဖလာရော ထွင်လို့ပါ အကုန်ချက်၏။ ကိုယ်တွေက အောက်သားမို့ထင် ဘာဟင်းချက်ချက် … အထူးသဖြင့် ငါးဟင်းချက်ရင် မပါမဖြစ် ချင်း/ဂျင်းကလေးတော့ တပြားရိုက် သို့မဟုတ် ထောင်းပီးထည့်တတ်သည်။ ခုခေတ်ကျ ရေချိုငါး အတော်များများ မွေးမြူရေးငါး ဖြစ်လာတော့ ကျုပ်တို့အခေါ် ဒိုက်စော်နံသမို့ ဂျင်းမပါရင် အနံ့တမျိုးပြောင်းသွားတတ်သည်။ နောက်တခုက ငါးဝယ်ရင် ပါးဟက်ရဲနေမှ ၀ယ်တတ်သည်။
ဒီပို့စ်က အတော်ကြာပီကော ဆက်မပွားတော့ဘူး ……
အဓိက ပြောချင်တာက ဘာဟင်းချက်ချက် ချင်းထည့်ချက်သင့်ကြောင်းနဲ့ ငါးမြင်းသားပေါက် အစား ငါးနုသန်းအိုးကပ်ဟု ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်။
မယ်မယ် ရဲ့ ညလေးကိုရော ဘာမှာချင်သေးလဲ ယွဲ?
စာ​ရေး​ကောင်း​သော မခိုင်​ဇာရဲ့ညီမအားလည်း ​ဆက်​​ရေးခိုင်းပါဦး​နော
သူကလည်း သူပေ့(ချ) နဲ့ သူဖြစ်နေတော့ ဟီးးးး